I-Casas do Paço - Casa Salmão
Cabeceiras de Basto, Braga, i-Portugal
I-ikhaya eliyindawo yokuhlala ephelele ibungazwe ngu-André
U-André uthole izilinganiso zezinkanyezi ezingu-5 ezivela ku-95% wezivakashi zakamuva.
Kwezinye izindawo zasemaphandleni, imizuzu engama-20 ukusuka enkabeni yeGuimarães, imizuzu engama-30 ukusuka enkabeni yeBraga, imizuzu engama-45 ukusuka enkabeni yePorto namabhishi, imizuzu engama-35 ukusuka eDouro, imizuzu eyi-15 ukusuka eRibeira de Pena, phakathi kwezinye izindawo. , uzothola iqoqo izindlu 4 ezimele, sikuhlomele ngokuphelele, ne air conditioning, inthanethi kanye yokubhukuda. Woza sihlangane!
Indawo ekahle, endaweni yasemakhaya, izinyathelo nje ukusuka ekufinyeleleni kalula emadolobheni amakhulu namadolobha anezivakashi kakhulu eNyakatho yePortugal. IPorto iyimizuzu engama-45 ukusuka lapho, iBraga imizuzu engama-30 neGuimarães imizuzu engama-20.
I-Casas do Paço yizindlu ezi-4 ezizimele, ngayinye ikwazi ukugcwala abantu abangu-4/5, inamagumbi okulala angu-2, ikhishi elinombhede usofa, igumbi lokugezela eli-1, indawo yokosa inyama kanye nethala lapho ungajabulela khona ukudla okunokuthula. Izindlu zihlome ngokuphelele. Sihlinzeka nge-inthanethi. I-air conditioner. Ichibi libiyelwe futhi lisetshenziselwa kuphela i-Casas do Paço. Woza uzosihlangabeza, uthole iNyakatho, futhi ujabulele ukuzola kwendawo yasemakhaya, ikhwalithi yokudla kwethu, iwayini lethu kanye nezimo zezulu ezinhle kakhulu.
Indawo yokupaka izimoto ezizimele.
I-Tâmega Cycle Path iqhele ngamamitha angama-500.
Izilwane ezifuywayo zamukelwa ngemali eyengeziwe kanye nesibopho ngasohlangothini lwabanikazi ngomonakalo odalwe yikho.
4.69(13 okushiwo abanye)
4.69 · 13 okushiwo abanye
Viajar,conhecer novas pessoas,culturas, ideias é sempre um objectivo. Comunicar é um gosto, e por toda a experiência vivida pelos locais onde passei, acredito que o que define o nosso bem estar fora de "casa" é a forma como somos recebidos e as experiências que novas pessoas nos proporcionam.
Viajar,conhecer novas pessoas,culturas, ideias é sempre um objectivo. Comunicar é um gosto, e por toda a experiência vivida pelos locais onde passei, acredito que o que define o no…
Sihlale sikhona ukuze sicacise noma yikuphi ukungabaza/sinikeze usizo noma ukuxazulula noma iyiphi inkinga.
Ukungena/ukuphuma kwenziwa yithi.
UAndré Ungumbungazi ovelele
Idiphozithi Yesibambiso - uma ulimaza ikhaya, kungenzeka ukhokhiswe imali efikela ku-$394.